वार्ता बाट समाधान खोज्नु हुन्न भन्ने होइन। जस्तो सुकै कड़ा आंदोलन गरे पनि अन्त्य मा वार्ता नै हुन्छ। २०४६ मा त्यही भयो। सन २००६ अप्रिल मा त्यही भयो। अहिले पक्ष विपक्ष दुबै सन २००६ का सहयात्री भएका कारणले होला जरुरत से ज्यादा आशा गरे जस्तो देखिन्छ मधेसी मोर्चा ले। मानि हाल्छ भन्ने छ। तर मानेको छैन।
प्रचंड ले त्यति बेला को मधेसी मोर्चा लाई बड़ो नाटकीय ढंगले फालेर यो उपिया संविधान ल्याए। प्रचंड ले उपिया भने बाबुराम ले उट। त्यसरी नै नाटकीय ढंगले ओली लाई एक धक्का दिने हो भने निकास निस्कन सक्छ। तर प्रचंड ले त्यो प्रयास गरे जस्तो देखिएन।
वार्ता का कस्तुरी मृग: प्रचंड। शक्ति को बैलेंस आफ्नो हात मा छ अहिलेको अवस्था मा। वार्ता को गाँठों फुकाउने ईमान्दारी नदेखाए जस्तो लाग्छ मलाई त। ओली को एजेंडा ओली को मात्र नभएर अब आएर प्रचंड को आफ्नो एजेंडा नै भैसक्यो जस्तो लाग्छ। होइन भने खोइ त दिएको झट्का?
झट्का दिनु मैं प्रचंड लाई राजनीतिक फाइदा पनि छ। अहिले माओवादी एमाले को बी टीम जस्तो इमेज छ। त्यस इमेज ले पार्टी झन झन खुम्चिने हुन्छ। एकतरफा नाकाबंदी खोल्नुस् भन्ने सुझाव का साथ पेश भएका प्रचंड ले आफुले दिन सक्ने झट्का ओली लाई नदिएर देशलाई १००% नाकाबंदी तर्फ लान लागेका छन। त्यो किन? त्यो कसका लागि?
एक मधेस दो प्रदेस देश छुट्याउन का लागि हो कि बहिष्करण मा परेका मधेसी र जनजाति को सशक्तिकरण का लागि हो? देश १००% नाकाबंदी मा जान्छ भने त्यसको प्रमुख दोष प्रचंड लाई जानेछ। किनभने वार्ता को चाभी प्रचंड को हात मा छ। अंक गणित त्यस प्रकारको छ। ओली लाई देश होइन सत्ता प्यारो। प्रचंड ले सत्ता डगमग नपारे सम्म ओली ले सुन्दैन।
झण्डै झण्डै सफल भइसकेको कार्यदल को वार्ता। एक्कासी के भयो? महेश आचार्य को कुरा पनि पॉजिटिव आइसकेको थियो। एमाले लाई सबैले मिलेर एक्लो पार्ने हो भने तु समाधान निस्कन्छ।
सीमांकन का लागि सही फोर्मुला: अहिले एउटा, १० वर्ष पछि अर्को